Oghere Uzo Okpukpo Ntughari nke Polycarbonate Roller China Manufacturer
Nkọwa:Ogidi Polycarbonate Pụtara,Ntughari na-achagharị azụ,Ogwe igwe anaghị agbacha
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Mkpuchi Mkpuchi Ikuku > Oghere Uzo Okpukpo Ntughari nke Polycarbonate Roller
Ihe Nlereanya.: HF-A018
24 HOURS AD ada
Okporo ụzọ dị elu nke ọnụ ụzọ ámá - Ịmepụta profaịlụ aluminom maka otu njikọ nke ụzọ, ụlọ abụọ-akwa, imepụta pụrụ iche, tinye na mpempe akwụkwọ.
Dị mfe ma mara mma, iguzogide nrụgide siri ike.
A na-eji ihe nkedo rụọ ọrụ dị iche iche na-emepụta ihe dị iche iche, na-adịgide adịgide ma na-adị mfe.
A na-eji egwu aluminụ na-arụ ọrụ, nke nwere ike ịbanye na ya, na-emepụta ebe dị jụụ.
Ihe: polycarbonate (PC bulletproof plastic)
Usoro nchịkwa: 24V DC, ogbi ọrụ, nchebe na a pụrụ ịdabere na ya, ogologo oge na ogologo ndụ. N'ihe banyere ihe mgbochi, ọnụ ụzọ meghachite ma ọ bụ kwụsịrị na-akwụsịghị na mberede n'oge mmeghe na mmechi.
Usoro mmeghe na mmechi, ụzọ ọkụ na egbu oge nkeji atọ na-akpaghị aka; ndị ọrụ nwere ike gbanwee gaa na nhọrọ nhọrọ mgbe ike ọdịda, ike na-enweghị ike imebi. Biko kpọtụrụ ya na ngalaba ọrụ anyị maka ihe ndị chọrọ.
--Emeghi ihe ọ bụla - Ejiri site na extruded aluminom, siri ike ihu igwe na nchara aka
na polycarbonate glazing na-eme ka ọkpụkpọ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara imebi.
1. Gịnị bụ oge nnyefe?
2 .. Gini banyere akwụkwọ ikike maka ibo ụzọ?
Anyị na-enye akwụkwọ ikike ọnwa 12 maka ọnụ ụzọ na ngwa niile. Ruo mgbe ebighị ebi na-enye ọrụ ahịa mgbe ọ gasịrị.
3. Ị na-enye ọrụ OEM?
OEM & ODM Service na-anabata.
4. Gịnị bụ MOQ?
1 pc dịkwa.
5. Olee maka ngwugwu ahụ?
Ogidi Polycarbonate Pụtara Ntughari na-achagharị azụ Ogwe igwe anaghị agbacha Ọkpụkpọ Ntugharị nke Polycarbonate Roller Polcarbonate Okporo ụzọ ọnụ ụzọ Crystal Shutter Elu ala na-eme ọfụma Ogige osisi na-ere osisi ọka Osisi PVC arụzi onwe